Mz စာရင်း — MYSTERY ZILLION
September 2008 edited September 2009 in MZ News
လက်ရှိ ရငွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ သုံးငွေကိုတော့ မရေးရသေးပါဘူး။ ကို DBA ကြီးရဲ့ ငွေက အပြည့်အစုံမရသေးတဲ့အတွက် ထည့်သွင်းထားခြင်းမပြုရသေးပါ။
September 2008 edited September 2008 Moderators
သြော်..ကိုစေတန်ရယ်....အနော်ရဲ့ နာမည်ကို copy & paste လုပ်လို့မရဘူးလားဗျာ...
တော်သေးလို့ ရှေ့က english လိုပါလို့...မဟုတ်ရင် သုံးလုံးစလုံး...တရုတ်စာ..တရုတ်စာ..တရုတ်စာ....ဘဲရေးလိုက်မလားသိ၀ူး။
အခုလို စာရင်းလေး ထုတ်ပြန်ပေးတာ ကောင်းပါတယ်ဗျို့ နောက်ဆိုရင်တော့ မအောင့်နိုင်တော့မှ အိမ်သာရှာတာထက် ကြိုပြီးရှာတာမျိုး လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ ... စီးပွားရေးဆိုတာ အမြဲကောင်းနေနိုင် တာမဟုတ်ဖူးဆိုတော့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်က ပါနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒီတော့ ရေရှည် စီမံကိန်းပုံစံလေးနဲ့ ရငွေ၊ သုံးငွေ စာရင်းလေတွေ မှတ်တမ်းတင်၊ ပြီးရင် Monthly Contribution ပုံစံမျိုးတွေအထိ သွားနိုင်ရင် ပို အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ... ပြီးတော့ ဒီထက် Creative ဖြစ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကိုလည်း တင်ဆက်နိုင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်ဗျာ ....
ကဲ.. ပြင်လိုက်ပြီဗျာ MK杰 ရေ... စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာ
သုံးငွေစာရင်းရှိတယ်ဗျ။ ခက်တာက အကြွေးပဲဖြစ်နေသေးတယ်။ အကြွေးဆပ်မှ တစ်ခါတည်းထည့်သွင်းပေးမယ်။ အခု link မှာ ကြည့်ရုံပဲလေ။ နောက်ပိုင်း update မှန်သမျှ ဖော်ပြသွားမှာပါ။
ကောင်လေး ... ဟို ကိုedit တို့ namtustar တို့ လှုငွေတွေရော ထည့်လေ၊ အဲဒါတွေက စေတန်နဲ့ ကျွန်တော် စာရင်းရှင်းပြီးသား မဟုတ်လား၊ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင်လှုငွေ မရသေးတာကို နားလည်တယ်။ ကျွန်တော့်ဆီက တဆင့်လှုတာတွေ ထည့်လို့ရနေတာဘဲ။ အဲဒီလို မလုပ်နဲ့လေ။ ကျွန်တော် နာမည်ပျက်မှာပေါ့။ :14::14::14::14::14:
ကို dba ကြီးရဲ့ ငွေက အပြည့်အစုံမရသေးတဲ့အတွက် ထည့်သွင်းထားခြင်းမပြုရသေးပါ။
ရေးထားတယ်လေ။ ဒီနေ့ခြောက်သောင်းရမှ ငွေပေါင်းဖြစ်မှာ။ :d
ပြီးမှ ထည့်သွင်းလို့ရမှာပေါ့ဗျ။ လက်ထဲမှာ ငွေမှမရောက်သေးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ဖြည့်မလဲဗျ။ :106:ဒီလူကြီးကလည်း စိတ်ကြီးပဲ။ လူကြီးသလို ဒေါသလည်းကြီးပါ့
ခုထည့်တော့လေဗျာ ရောက်ပြီမဟုတ်လား ....
ငှဲ ငှဲ ငှဲ ...:65::65::65::65:
Hosting ဖိုးတွေပါ ရှင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဗမာငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဒေါ်လာ ၁၄၅ ကျန်ဦးမှာပေါ့နော်။ ဟုတ်လား။ စာရင်းအရဆိုရင်။
ကျွန်တော် ကိုကျော်ဇောသိန်းကို လှူရင်ရလား။ အနည်းဆုံးဘယ်လောက်လှူရသလဲနော်။
တစ်လချင်းလှူရတာလား။ စာရင်းရှင်းတမ်းကို ဘယ်မှာရေးထားတာလဲ။ ဖတ်ချင်လို့ပါ။
October 2008 edited October 2008 Moderators
ဒီ သရက်ရဲ့ Pg 1 မှာ ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်။
ကိုကြီးတို့ရေ အလှူငွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲဟင်။ ကျွန်တော်စိတ်၀င်စားတယ်ဗျ။ လိပ်စာလေးပေးနော်။
မင်မင် စေတန်ဂေါက် ကိုဆက်သွယ်ကြည့်ပါ့လား သူ့ကို pm ပို့ရင်ပို့လိုက်လေ
Super ကော်ဖီမသောက်ပါနဲ့ လားဗျာ :Oကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တယ်
တိုင်တော့မတိုင်ပြောနဲ့နော် :65:တကယ်အကြံပေးချင်လို့ ပါ:39:
GunGun wrote: »
super ကော်ဖီမသောက်ပါနဲ့ လားဗျာ ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တယ်
တကယ်ကော်ဖီမစ်ကို အန္တရာယ်ရှိလို့ မသောက်ခိုင်းတာဆိုရင် တခြားမှာ thread အသစ်ဖွင့်သင့်ပါတယ်။ အခုဟာက ဒီတော့ပစ်နဲ့ လုံး၀မဆိုင်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။
များလူဒါန်းငွေကို user များရဲ့ about ရဲ့ site မှာ MZ လှုဒါန်းငွေထဲသို့ ထည့်သွင်းရန်အတွက် nick name များ လိုအပ်ပါတယ်။ အထက်ပါ လှုဒါန်းထားသူများရဲ့ nick name ရှာမတွေ့လို့ပါ။
May 2009 edited May 2009 Administrators
ကိုသာသာရဲ့ ငွေ ၄သောင်းကိုတော့ ကိုDBA အိမ်က သွားမယူရသေးဘူးဗျ... ဒီလတော့ လုံးဝ ကို မအားဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ....
ဒါမျိုးလာရေးတယ်ဆိုတာဒီ Thread ကိုသရှော်နေသလိုလုပ်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်တော့ယူဆပါ
http://www.mysteryzillion.org/forums...?t=1233&page=3 Dear brother saturngod, Hope you are busy. I happened to explore my profile recently and noticed that in the donation to MZ it said "မရှိသေးပါ". I think it should be mentioned in the member profile if member donated some money regardless of the amount. I don't know whether the profiles of other members who donated to MZ updated or not. Please check it if you have time. Thanks for your understanding.
ဟုတ်ကဲ့... ကျွန်တော် list ထဲမှာ ရှိတဲ့ user name တွေကို profile ထဲမှာ မထည့်ရသေးပါဘူး... ကျွန်တော် နောက်ပိုင်း ဖြည့်ထည့်ပေးသွားပါမယ်... အဲဒီကိစ္စအတွက် ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ်.. အားတဲ့အချိန်တွေမှာ ဖြည့်ထည့်ပေးသွားပါမယ်
September 2009 edited September 2009 Registered Users, Moderators
ကျွန်တော် thread အသစ်တင်စရာမလိုဘူးထင်လို့ ဒီမှာပဲ ဆက်ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ အခု ၂၇.၀၉.၂၀၀၉ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်အလှူငွေထည့်တာလဲဆိုတာ ကိုဇူးဇူးနဲ့ကိုကိုဝင်းတို့ ဒီမှာတစ်ချက်တင်ပြပေးပါလား။ ပိုငွေကတော့ ကျွန်တော်ဆီမှာ ၁၃၀၀၀ ကျပ်တိတိ အပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်အရ ငွေလက်ခံဖို့အတွက်တာဝန်ရှိသူ၂ယောက်ထဲက တစ်ယောက် ကျွန်တော်ဆီမှ ငွေကိုလက်ယူခြင်းဖြင့်ကူညီပါ။ ( လာမယူရင် သုံးလိုက်မှာနော် :P)
ကိုဇူးနဲ့ကိုဝင်း အလှူငွေဘယ်လောက်ကောက်ခံရရှိလဲရယ် ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ထည့်တာရယ်ကို ဒီမှာတင်ပြီးတော့ လိုအပ်တာများကို စေတန်ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးပါနော်။
ကျွန်တော် thread အသစ်တင်စရာမလိုဘူးထင်လို့ ဒီမှာပဲ ဆက်ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ အခု ၂၇.၀၉.၂၀၀၉ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်အလှူငွေထည့်တာလဲဆိုတာ ကိုဇူးဇူးနဲ့ကိုကိုဝင်းတို့ ဒီမှာတစ်ချက်တင်ပြပေးပါလား။ ပိုငွေကတော့ ကျွန်တော်ဆီမှာ ၁၃၀၀၀ ကျပ်တိတိ အပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်အရ ငွေလက်ခံဖို့အတွက်တာဝန်ရှိသူ၂ယောက်ထဲက တစ်ယောက် ကျွန်တော်ဆီမှ ငွေကိုလက်ယူခြင်းဖြင့်ကူညီပါ။ ( လာမယူရင် သုံးလိုက်မှာနော် )
ဟုတ်ကဲ ့ခင်ဗျာ...ဒါက ကောက်ခံစာရင်းပါ။
ဦးတွီ = 10000
အာသောက = 10000
ကိုကို၀င်း = 10000
ကိုကြီးကီလို = 10000
ကိုရောင်စိန် = 5000
ကိုကျော်ဖြိုး = 5000
ကိုကြည် ့ရှောင် =3000
အားလုံးပေါင်း 53000 ရရှိပါတယ်။
ရသုံးစာရင်းကိုတော ့..ကိုကြီးရောင်စိန် တင်ပေးပါလိမ် ့မယ်ခင်ဗျ။
ဒီနေ့ညနေပိုင်းလောက်ဆိုင်မှာလာယူမယ် ... :d